ထာ ၀ ရအပြစ်ဒဏ်ရှိပါသလား
ဆောင်းပါး > အသက်တာ၏စကားပြောသော > ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ရှိသည်
နာခံမှုမရှိသောကလေးကိုအပြစ်ပေးရန်သင်၌အကြောင်းရှိဖူးသလော။ ပြစ်ဒဏ်ဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မင်းပြောဖူးသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၌ကလေးရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်မေးခွန်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ ပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့သင့်ကလေးသည်သင်၏စကားကိုနားမထောင်ဘူးလား။ ကောင်းပြီ၊ မသေချာရင်အချိန်ယူစဉ်းစားပါ။ အိုကေ၊ အခြားမိဘများနည်းတူသင်ဖြေဆိုပါကယခုသင်သည်ဒုတိယမေးခွန်းသို့ရောက်လာသည်။ သင်သည်သင်၏ကလေးအားမနာခံမှုအတွက်အပြစ်ပေးဖူးပါသလား။ နောက်ဆုံးမေးခွန်းကိုမေးကြစို့။ ဝါကျသည်မည်မျှကြာရှည်သနည်း။ ပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်မင်းအပြစ်ပေးတာကိုဆက်လုပ်မယ်လို့မင်းပြောတာလား။ အရူးလို့ထင်လား
အားနည်းပြီးမစုံလင်သောမိဘများဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအားကျွန်ုပ်တို့အားမနာခံပါကခွင့်လွှတ်ပါလိမ့်မည်။ အခြေအနေတစ်ခုတွင်သင့်လျော်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်သည့်တိုင်သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်သင့်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးသင့်အားအပြစ်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှမည်မျှမှန်ကန်ကြောင်း၊
သို့သော်ခရစ်ယာန်အချို့ကကျွန်ုပ်တို့အားယုံကြည်စေလိုပြီးအားနည်းခြင်းလည်းမရှိ၊ မစုံလင်သူလည်းဖြစ်၊ the ၀ ံဂေလိတရားအကြောင်းတစ်ခါမျှမကြားဖူးသူများပင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုထာဝရအပြစ်ဒဏ်ပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖဘုရားသခင်ကအပြစ်ပေးသည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်ကရုဏာတော်သည်အလွန်ကြွယ်ဝပါ၏။
ဤအရာကိုခေတ္တမျှသုံးသပ်ကြည့်ကြပါစို့။ အကြောင်းမှာသခင်ယေရှုထံမှကျွန်ုပ်တို့သင်ယူရရှိသောအရာနှင့်ထာဝရအပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့သောခရစ်ယာန်များကယုံကြည်မှုအကြားကြီးမားသောကွာဟချက်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - ရန်သူတွေကိုချစ်ဖို့၊ ငါတို့ကိုမုန်းတီးသူတွေကိုကောင်းမှုပြုဖို့ယေရှုမိန့်မှာခဲ့တယ်။ သို့သော်ခရစ်ယာန်အချို့ကဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်သည်သူ၏ရန်သူများကိုမုန်းသည်သာမကထာဝရသူတို့ကိုထာဝရညှာတာရန်၊
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူယေရှုကစစ်သားများအတွက်“ အိုအဘ၊ သူတို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါ။ သူတို့သည်အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုမသိပါ” ဟုဆုတောင်းခဲ့သည်။ သို့သော်ခရစ်ယာန်အချို့ကဘုရားသခင်သည်ကမ္ဘာကြီးမတည်ရှိမီသူခွင့်လွှတ်ရန်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသူများကိုသာခွင့်လွှတ်သည်ဟုသွန်သင်သည်။ ကောင်းပြီ၊ တကယ်လို့ယေရှုရဲ့ဆုတောင်းချက်ကဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်သင့်ဘူးမဟုတ်လား။
Jesus sagt: «Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? … Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten!» (Lukas 11,11-13) ။
Die Wahrheit ist genauso, wie es uns Paulus schreibt: «Gott liebt die Welt wirklich. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde» (Joh. 3,16-17) ။
သင်သိသည်မှာဤလောက၏ကယ်တင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်အလွန်ချစ်သောကြောင့်၎င်းကိုကယ်တင်ရန်သားတော်ကိုစေလွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။ ဘုရားသခင်ပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှီခိုပြီး to ၀ ံဂေလိတရားကိုလူတို့အားဝေငှရာ၌ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုအပေါ်မူတည်လျှင်ကြီးမားသောပြproblemနာရှိလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမတည်ဘူး။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဤအလုပ်ကိုလုပ်ရန်စေလွှတ်ပြီး၊
the ၀ ံဂေလိတရားဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်း၌ပါ ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းချီးရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ချစ်မြတ်နိုးပြီးဂရုစိုက်သောလူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မသိသေးသောသူများနှင့် the ၀ ံဂေလိတရားကိုမကြားဖူးသူများ၏အမှန်တကယ်ကယ်တင်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်လူတိုင်း၏ကယ်တင်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ဂရုစိုက်သောကိစ္စဖြစ်ပြီး၊ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်သာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည် ဖြစ်၍၊